ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရရှိငွေ မှတ်တမ်း (ကျပ် ၄၂၆၁၈၀၀ – ၈-၇-၂၀၁၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရရှိငွေ မှတ်တမ်း (ကျပ် ၄၂၆၁၈၀၀ – ၈-၇-၂၀၁၂ )
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 13, 2012 in Community & Society, Events/Fundraise, Myanmar Gazette | 160 comments
အလှုငွေ ထည့်ဝင်သူများခင်ဗျား ။ နံမည် စာလုံးပေါင်း မှားယွင်းခြင်း ၊ ထည့်ဝင်သော ငွေ တန်ဖိုးမှားယွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်လိုသော အကြောင်းများရှိပါက အားမနာတန်းပြန်ပြောစေလိုပါသည် . ပြန်လည် ပြင်ပေးပါမည်.။
11-6-2011 တွင် စတင်ကောက်ခံရရှိငွေ
၁၉။ ဦး Foreign Resident .. ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသိန်း)
၆၇။ ပင်လယ်ပျော် နဲ့ မခိုင်ခိုင် ဇနီးမောင်နှံ …. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၆၉။ကိုနိုင်ဝင်းအောင် ..၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၉။ မနိုဗီ .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း )
၉၂။ အာဂ နှင့် နွယ်ပင် … ၁၅၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
လေးပေါက်ရေ ကျွန်တော့် အလှူငွေက ၃၀ရက်နေ့လည်ပိုင်းလောက်မှ အဆင်ပြေမယ်ဗျ။
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ။ အကြံပေးပါအုံးလေးပေါက်ရေ။
အလှူငွေကို လကုန်ပြီး ၂ ရက်နေ့အထိ ကောက်ခံဘို့ စီစဉ်ထားလိုက်ပါတယ်။
(လကုန်ရက် ထောတဲ့လူတွေကိုစောင့်ချင်လို့… :D )
ပြီးမှ ၃ ရက်နေ့လောက်မှာ မန္တလေးနဲ့ နေပြည်တော်က အလှူငွေတွေကို စုပြီး
July 3rd ကလဲ ပထမ၀ါဆိုလပြည့်ဖြစ်နေပါတယ်။
မန္တလေးနဲ့ နေပြည်တော်က ငွေလွှဲကို July 4th မှာ မှ လွှဲရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
၁ မန္တလာသူ	ကျပ်ငါးသောင်း
၂ TTNUနှင့်သားကိုဆန်နီ	ကျပ်နှစ်သောင်း
၃ POOCH(နန်းမတော်မယ်ပု)	ကျပ်ငါးသောင်း
4 ရွှေမင်းသား	ကျပ်သုံးသောင်း
5 ခင်ခ	ကျပ်ငါးသောင်း
6 အန်ကယ်ဂျီး1974	ကျပ်သုံးသောင်း
7 မိနှင်းလေး	ကျပ်တစ်သောင်းငါးထောင်
8 မာမာငြိမ်း(စာဖတ်သူ)	ကျပ်တစ်သောင်း
9 မ၀င်းနု (စာဖတ်သူ)	ကျပ်တစ်သောင်း
(စုစုပေါင်း ကျပ်နှစ်သိန်းကိုးသောင်းငါးထောင်) နေ့လည်23း0
11 ပေစိ	ကျပ်တစ်သောင်း
12 ထုံးဘဲဥ	ကျပ်နှစ်သောင်း
13 ဖရဲမ	ကျပ်တစ်သောင်း
14 ဒို့ခေတ်ဆေးဆိုင်(မန္တလေး)	ကျပ်နှစ်သောင်း (မောင်ပေမိတ်ဆွေ)
15 ၀င်းဝင်း(မန္တလေးဂေဇက်)	ကျပ်သုံးသောင်း(စုစုပေါင်း ကျပ်သုံးသိန်းရှစ်သောင်းငါးထောင်တိတိ)113း0
16 ဇောက်ထိုး	ကျပ်ငါးသောင်း
ကိုးနက်ရှင် ကြောက်သွားလို့ ည (သို့ ) မနက်စောစော မှ ကိုအမတ်မင်း ၊ လေးပေါက်တို့ ရဲ့ update တင်ပါ့မယ် ။
မန်းဂေဇက် မန်ဘာ တွေရဲ့ တက်ကြွမှုကတော့ စံတင်ထားလောက်ပါပေရဲ့…
အလှုရေစက် လက်နဲ့မကွာ စကားရပ် အတိုင်းပါပဲဗျာ …
နောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ … ကြိုးစားနေရပါတယ်….
ဖြစ်မြောက်ရေး ကူညီပံ့ပိုးနေကြပါတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆော်များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း….။
အလှူငွေတွေရရှိမှုကတော့ အားရစရာကောင်းလိုက်တာ …ကျွန်မကတော့ အလှူနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လှူဒါန်းဖို့က အချိန်မရှိတော့ အခုလို နိဗ္ဗာန်ဆော်တွေက ဆော်အောမှပဲ လှူဖြစ်တယ် ကိုယ်တိုင်ကတော့ လမ်းသွားလမ်းလာရင်း ဘုန်းတော်ကြီးတွေ သီလရှင်တွေလောက်ပဲ လှူဖြစ် ပါတယ် ……. မနေ့က ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဈေးထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်ရင် ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ငါးခြောက်တွေရောင်းနေပါတယ် သူ့ဆိုင်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အလှူငွေကောက်ခံတဲ့ စာရွက်လေးကပ်ထားတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မအမေကိုမေးမိတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာလားအမေလို့ ….. တကယ်ပါ ကျွန်မက တော်ရုံဆို ဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့ လူတစ်ယောက် …… အခုလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို ဦးဆောင် ကောင်းတွေကလမ်းပြပေးခဲ့တာ အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် ……. ဂေဇက်မိသားစုရဲ့မည်သည့်အလှူမဆို ကျွန်မတတ်နိုင်သလောက်နဲ့အားဖြည့်လှူဒါန်းနေရတာ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ် …….
ဂေဇက်မိသားစု နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းသာအားရဖွယ် အလှုတစ်ခုဖြစ်လေပြီ။
King of Secrets Bo Min says:
ကိုယ်ချင်းတော့စာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘိုင်ပျက်နေတယ်ဂျာ၊ အနော် ဘိုင် တက်တဲ့ နေ. လှုမယ်ဂျာ
ကျေးဇူးပါ ကိုGipsy , ခိုင်ခိုင်၊ ကိုသန်းထွဋ်ဦး ( ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ၊ကျွန်တော် အသက်မကြီးချင်လို့ ကိုသန်းထွဋ်ဦးလို့ဘဲခေါ်မယ်နော့်း:grin:) ကိုဘိုမင်းရေ။ လှုတာကော အားပေးတာကော။
လှုချင်တယ်၊ မလေးကနေ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဗျ။
လောကမင်းရေ ..ကိုရွှေတိုက်စိုး .. ၀၉ ၄၉၃၀ ၃၀၄၅
ကိုအမတ်မင်း .. ၀၉ ၄၂၁၁၁ ၈၆၈၅ တို့ထံ ဖုန်းဆက်သွယ်လိုက်ရင် ရပါတယ် ။ ရန်ကုန်ကို လွှဲနေကျအတိုင်းလွှဲ လို့ ရပါလိမ့်မယ် ။ နောက် အခု မလေး ကနေ ရန်ကုန် ဘဏ်ကိုလည်း လွှဲလို့ရနေပြီမဟုတ်လား ။
နေပြည်တော်မှ ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ကြည် အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်းကျပ်) ထည့်ဝင်လာပါသည်..
-ကိုထွန်းလင်း .. … …. .၅၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် ငါးသောင်း)
-ကိုရွာစားကျော် … .. .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း)
-ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ကြည် .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း)
လှူသူပေါင်း သာဓု သာဓု သာဓု
မလှူနိုင်လို့ သာဓု သာဓု သာဓု ဗျာ
ငါ့ကိုတော့ သိဒေးဒယ် မဟုတ်လား ..
မင်း ဂေဇက် သုံးဖို့ ပြောခဲ့တဲ့ လူလကွာ ..
ဂလောက်ဆို သိရောပေါ့ ..
weRone ကို သိရင် .. ငါ့ကိုလည်း သိမှာပါ .. :D
ရွာသားတစ်ဦး – ၂၀၀၀၀ ( နှစ်သောင်းကျပ်)
ပစ္စည်းတခုဟာ ကိုယ့်အတွက်မလိုပေမဲ့ မရှိတဲ့သူအတွက်ကျတော့ လိုအပ်ပါတယ်
နတ်ပြည်ရောက်တော် နတ်သမီးစကီလေးတွေနဲ့ ပျော်မြူးနိုင်ပါစေ
ဥုံ မာနီ မာနီ ဟုန်
ကိုးနက်ရှင် အကြီးအကျယ် နှိပ်စက်နေပါသောကြောင့် အချိန်နှင့် တပြေးညီ update မလုပ်နိုင်သည်ကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ။ ကိုရွာစားကျော် ၊ကိုအမတ်မင်း နှင့် မဆူးရေ . update လုပ်ပြီးကြောင်းနှင့်လှုသူ အားပေးသူအားလုံးအားကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ခွေးလဲ လွှတ်ပါမယ်။ ကြောင် လဲ လွှတ်ပါမယ်။
စိတ်အေးအေးထားပြီး အချိန်ယူပါ။ :D
အလှူငွေတွေ အတော်ရနေပြီပဲ ။
ရွာသူ၊ရွာသားတွေ စည်းလုံးကြတာ ၀မ်းသာစရာကောင်းပါတယ် ပီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ် ။
အလှူငွေကိုတော့ ဒီနေ့နေ့လည်တယောက်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပေးလိုက်ပါမယ် ။
လှူခိုင်းထားပါတယ် အမတ်မင်းဆီ ဘဏ်ကနေတဆင့် တနင်္လာနေ့လွဲပေးပါလိပ်မယ်….
16 ဇောက်ထိုး	ကျပ်ငါးသောင်း(စုစုပေါင်းကျပ်လေးသိန်းသုံးသောင်းငါးထောင်တိတိ)13း15
17 nhein phu(မန္တလေးမြို့)	ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ
(စုစုပေါင်း ကျပ်ငါးသိန်းသုံးသောင်း ငါးထောင်တိတိ)133း0
hnin phyu နာမည်နဲ့တစ်သိန်းလှူမယ်ဆိုပြီးကိုထူးဆန်းကိုကတိပေးထားလို့ပါ။
30-6-2012 ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှ ထပ်မံ ကောက်ခံရရှိမှု
ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်ကြည်လေး…… …၅၀၀၀ ကျပ်
ကိုအောင်ခိုင်ဖြိုး+မလွင်လွင်အောင်.. ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ကြောင်တော့ မလွှတ်ပါနဲ့ အရီးလတ် ရယ် ။ ဦးကြောင်တို့ ကြောင် ဂိုဏ်းဆို ကြောက်လို့ပါ ။ :grin: စကားအတင်းစပ် .. ဦးကြောင်လည်း အခုတစ်လော ပျောက်နေတယ် ။ မန့်တာတွေ သိပ်မတွေ့မိဘူး ။
ကျေးဇူးပါ ကိုAKKO ၊ ကိုရင်မောင် ၊လေးပေါက် ၊ အန်ကယ်လေး၊မhnin phyu ၊ နှင့် ကိုရွာစားကျော်တို့ခင်ဗျား။
ကျနော်အလှူငွေလက်ခံစဉ်က စာလုံးပေါင်းလေး ရေးယူခဲ့ရမှာ။
17 hnin phyu (မန္တလေးမြို့)	ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ
18 မင်းဇော်	ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ
(စုစုပေါင်း ကျပ်ခြောက်သိန်း သုံးသောင်းငါးထောင်)153း0
update လုပ်ပြီးကြောင်းပါ လေးပေါက်ရေ။
3-7-2012 နေ့တွင် ကောက်ခံရငွေအားလုံးကို လွှဲပေးလိုက်ပါတော့မည်။.
ကျေးကျေးပါ လေးပေါက်ရေ လွှဲလို့ရပါသည်ခင်ဗျ။
ရွာထဲလည်း ၀င်ရအတော်ခက်နေပါသည် ။ မနေ့ ညကလည်း မရပါ ။ မနက်ကလည်း မရပါ။
စေတနာများတဲ့ ရွာသူ၊ရွာသားအပေါင်းတို့ ၀မ်းသာပါကြောင်းနဲ့
လက်ရှိထက်မက တိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းပါ၏။
ကိုရင်မောင် အနောက်မှာ..မမယ်မ နာမည်လေးကိုလည်း တွဲထည့်ပေးပါအုန်းလို့..
အမတ်မင်းရေ သတိတရ နာမည်လေးတွဲထည့်ပေးတာကျေးဇူးပါ….ခုလိုညီနောင်
အလှူငွေတွေကအားရစရာပါပဲ။ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ အလှူအထမြောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးကြသော
သူများ အားလုံးကို လေးစားပါ၏။ လူရောစိတ်ပါ အပင်ပန်းခံ၊ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ဆောင်ရွက်ပေးကြသော ရွာသူ၊ရွာသားများအားလုံ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
အလှူငွေတွေက အားရစရာပဲ …. အလှူငွေလာယူပေးတဲ့ ကိုအမတ်မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
စုံစုံ………… ၁၀၀၀၀ (တသောင်းကျပ်)
(3-7-2012)နေ့ထိ စုစုပေါင်းကောက်ခံရငွေပေါင်း ကျပ်ခြောက်သိန်းလေးသောင်းငါးထောင်တိတိ)
(စုစုပေါင်း ကျပ်ခြောက်သိန်း သုံးသောင်းငါးထောင်)163း0
19 ကိုပေါက်	ကျပ်တစ်သောင်း
စုစုပေါင်း ကျပ်ခြောက်သိန်း လေးသောင်းငါးထောင်တိတိ)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ update လုပ်လိုက်ပါပြီလေးပေါက်ရေ။
ဘယ်သူဦးဆောင်သည်ဖြစ်စေ ကျနော်မန်းလေးအတွက် တာဝန်ယူပြီးကောက်ခံပေးပါမည်။
ကိုကြောင်ကြီး ……..၄၅၀၀၀ (လေးသောင်းခွဲကျပ်)
ချစ်ရင်ထူးနှစ်………၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်းကျပ် )
အလှူနေ့မှာ ပါဝင်လှူဒါန်းချင်တဲ့ သူတချို့လည်းရှိကြောင်းပါ..
အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦး …..၁၀၀၀၀ (တသောင်းကျပ်)
ဒီကနေမှာ ထပ်မံလှုဒါန်းကြတဲ့ အတွက် စုစုပေါင်း ၄၂၆၁၈၀၀ လေးဆယ့်နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း နှင့် တစ်ထောင့် ရှစ်ရာ ရရှိပါသည် ။ ၄င်းမှ ၃၂ သိန်းတိတိ ကို ရခိုင်သဟာရ အသင်းကိုလှုဒါန်းခဲ့သည့်အတွက် လက်ကျန်ငွေ ၁၀၆၁၈၀၀ (ဆယ်သိန်း ခြောက်သောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာ တိတိ) ရှိပါသည် ။
၄င်းလက်ကျန်ငွေဖြင့် ကိုထွန်းဝင်းလတ် ပ်ိုစ်တွင်ပါသော မော်လူး ဒေသမှ ရွာစာသင်ကျောင်းသို့ လှုဒါန်းသွားပါမည် ။
ကိုထွန်းဝင်းလတ် နှင့် အဆက်အသွယ် ရရှိပြီးပါက အသေးစိတ်ပြန်လည်တင်ပြပါမည် ။ပါဝင်ထည့်ဝင်သူများ၊
ပါဝင်ကောက်ခံပေးသူများ ၊ အားပေးစကား ပြောကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
အမှတ်စဉ် ၁၀၀ မှာ ဒေါ်ကျင်စု က ဒေါ်ကျင်နုဖြစ်နေလို့။ အဲဒါလေး….